Danemarka : Farany, Niantso Fifidianana Ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2011 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, македонски, English
Androany(26 Aout 2011), nanala ny fitaintainan'ny Danoa ihany ny Praiminisitra Danoa Lars Løkke Rasmussen nony farany, tamin'ny fiantsoana fifidianana parlemantera : ny andro lehibe dia afaka telo herinandro, ny 15 Septambra.
Ny fanambaràna dia fanafahana ho an'ny maro. Manomboka mandeha sahady ny siosion-dresaka fa hoe mbola resaka anjorony fotsiny ihany ny fifidianana, ary ny haino aman-jery Danoa sasany dia naminavina fa mety hatao mialoha ny fialantsasatry ny lohataona (ny Parlemanta Danoa dia miala sasatra manomboka ny fisasahan'ny volana Jona hatramin'ny Talata voalohany amin'ny volana Oktobra). Ity herinandro farany ity mialoha ny fanambaràna ny datin'ny fifidianana dia nasongadin'ny tsy fananam-paharetana, ary ireo Danoa mponin'ny aterineto dia naneho hevitra tamin'ny alalan'ireo fanambaràna mananihany tany anaty aterineto.
Tsy hisy Fifidianana izany, na oviana na oviana
Ny pejy Tumblr ‘tsy hisyfifidianana izany naoviananaoviana!’ (derbliveraldrigvalgever.tumblr.com) [da] dia natomboka roa herinandro lasa ary izao dia feno an'ireo karazanà dokambarotra, sary sy feo fandrebirebena, mitaky amin'ny feo henjana fa ny fifidianana dia tsy hoavy mihitsy. Iray amin'ireo singa malaza ny dika natonta avy amin'ny kabarin'ny Praiminisitra tamin'ny Taombaovao : “ Tsy maintsy manao fifidianana isika. Izany dia voasoratra ao anaty lalàm-panorenana. Kanefa manome toky anareo aho…fa tsy hisy velively izany,” hoy ny Praiminisitra miteny amin'ny feo mieboebo. Ny pejy Tumblr izao dia manana “mpitia” eo amin'ny manodidina ny 3700 ao amin'ny Facebook
an'i Christian Panton
Sary fantin'ny Bokotra fidianana
Fitaovana iray hafa malaza ny ‘Bokotra fifidianan’ (valgknappen.dk) [da], noforonin'ny mpianatra iray momba ny siansin'ny solosaina, Christian Panton, tany am-piandohan'ity herinandro ity. Izany dia pejy tsotra misy bokotra iray ary lahatsoratra fohy : “Danoa 27152 no efa nanindry ilay bokotra fifidianana. Miandry an'i Lars Løkke Rasmussen sisa isika izao.”
Ny governemanta amperinasa dia nandray ny fitantanana ny taona 2001 ary mbola voafidy fanitelony indray tamin'ny fifidianana farany, ny taona 2007